मन्त्रिमण्डल फेरि हेरफेर हुने, १० औँ लटमा को को थपिँदैछन् ? « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 24 February, 2020 4:37 am
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शपथसँगै लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । पहिलो लटमा मन्त्री बनेका दुबै जना अहिले मन्त्रिपरिषद् हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीले २ वर्षको अवधिमा मन्त्रिमण्डल ९ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भइसकेको छ । मन्त्रिमण्डल २०७४ सालमा फागुन ३, १४ र चैत १२ गते गरी ३ पटक विस्तार भएको थियो । २०७५ सालमा जेठ १८, साउन १८ र फाुगन १६ गरी ३ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ । मन्त्रिमण्डल २०७६ सालमा पनि साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ गरी ३ पटक विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्तीले २०७५ जेठ १८ गते फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभयो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र मो इस्तियाक राईनलाई शहरी विकासमन्त्री बनाइयो । यादव उपप्रधानमन्त्री भएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि उपप्रधानमन्त्तीमा बढुवा गरेर प्रधानमन्त्री पछिको वरियातामा राखियो । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि मन्त्रीमा बढुवा गरियो । बढुवासँगै बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद् बैंठकमा सहभागी हुन पाउने अवस्था बन्यो ।
बंगलादेशमा अध्ययनरत युवतीबारेको अभिव्यक्तिले विवादमा परेपछि तामाङले २०७५ साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिनुभयो । तामाङको राजीनामा पछि त्यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्तीले केही दिन आफै सम्हाल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले २०७५ साउन साउन १८ मा मन्त्रिमण्डल फेरि विस्तार गर्नुभयो । भानुभक्त ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था नियुक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिएपछि सत्ताबाट बाहिरिनु भएकी पद्मा अर्याललाई भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका डा. सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले गएको मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल फेरि पुर्नगठन गर्नुभयो । चौथो पटकको पुर्नगठनमा ९ मन्त्री हटाइए, ९ नयाँ थपिए । प्रधानमन्त्रीले एमाले पक्षबाट बनेका ३ मन्त्री र १ र राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो । रवीन्द्र अधिकारीकाे निधनपछि लामाे समय अर्कैमन्त्रीलाई खप्टयाइएकाे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनन मन्त्रालय याेगेश भट्टराईले पाउनुभयाे ।
भौतिकपूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई पदमुक्त गरियो। पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा पनि पदमुक्त गरियो । समाजवादी पार्टीबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई पनि हटाइयो ।
यस्तै पूर्व माओवादीको कोटाबाट सरकारमा गएका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटायो । त्यसबेला नेकपा सांसदहरू वसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भूसाल, हृदयेश त्रिपाठी र पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भुसाल कृषिमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, रामेश्वर राय श्रम र लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति गरियो । उहाँहरुले अहिले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला मोती दुगडले, नवराज राउत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री बनाउनुभयो । उद्योगपति दुगडले उद्योग, राउतले स्वास्थ्य र रामवीरले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ ।
यादवको राजीनामापछि रिक्त रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भानुभक्त ढकालले सम्हाल्नु भएको छ । ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा सरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बन्नुभएको छ । राईनको राजीनामापछि शहरी विकासको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्हाल्नु भएको थियो । बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिख प्रकरणमा बिहीबार नैकिताको आधारमा पदबाट राजनीतिमा दिनुभएको छ ।
बाँस्कोटाको राजीनामापछि तत्कालको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्हाल्नु भएको छ । शहरी मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई दिइएको छ । यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि खतिवडा र नेम्वाङलाई दिइए पनि त्यसका लागि उपयुक्त मन्त्री खोजी भइरहेको छ ।
नेकपामा यी दुई मन्त्रालयमा आकांक्षी थुप्रै छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यम विजयी भएपछि नेतृत्वमा उहाँलाई पनि मन्त्री बनाउन दबाब परेको छ । श्रेष्ठ यसअघि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नु भएको छ । प्रवक्ताको जिम्मेवारी समाले पनि पार्टीमा उहाँ परराष्ट्रको लागि उपयुक्त मानिनुहुन्छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालय प्रदिप ज्ञवालीले समालिरहुनुभएको छ । अहिले भइरहेका मन्त्रीहरुमा कार्य मूल्यांकनको हिसाबले ज्ञवाली उत्कृष्ट ठहरिनुभएको छ । विघटित एमालेको प्रचा।र विभाग प्रमुख समेत भइसक्नु भएका ज्ञवाली संचारको लागि दक्ष तथा उपयुक्त मानिनुहुज्छ । यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सारेर श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन सक्ने संभावना समेत देखिएको छ ।
त्यस्तै महिला महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि पछिल्लो समय विवादमा पर्नुभएको छ । महिला अधिकारकर्मी सवाल चर्को रुपमा उठाउँदै आएको नेकपाले महिला मन्त्री भने पुरुषलाई बनाएको छ । यही विषयलाई लिएर अन्य दलले नेकपाप्रति कटाक्ष समेत गर्न थालेका छन् । उता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउन दबाब परेको छ । एमाओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यतिर लाग्नु भएका भुसाललाई अध्यक्ष दहालले राम्रै अवसर दिने आश्वास दिएर माओवादी केन्द्रमा ल्याउनु भएको थियो । माओवादी केन्द्रमा आएपछि उहाँले तत्कालीन अवस्थामा उहाँले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो । तर माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरण भने भुसाल पार्टीमा भूमिका विहीन हुनुभएको छ । पार्टीमा भूमिका विहीन भएकै कारणले उहाँलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब परेको हो । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा पुरुष समालिरहेकको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भुसालले पाउने संभावना छ । नेकपामा पछिल्लो समय मन्त्री विवादरहित हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसकारण गुरुङलाई मन्त्रीबाट हटाउने संभावना बढी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि अध्यक्ष दाहालसँग सामान्य छलफल गरेर एकलौटी रुपमा मन्त्री नियुक्ति गर्दै आउनु भएको थियो । त्यसले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका केही नेता असन्तुष्ट बन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगले मन्त्री बनाउँदा त्यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि विवाद मात्र बढेन, मन्त्रीहरु नै अनेक विवादमा पर्न थाले । त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुन थाल्यो । मन्त्रीहरुको विषयलाई लिएर आफ्नो आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालसँग समेत परामर्श गर्न थाल्नुभएको छ । बाँस्कोटा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेका केही मन्त्रीहरुलाई फेर्ने उदेश्ले नेपाल र खनाललसँग संवाद शुरु गर्नुभएको स्रोत बताउँछ । दुई मन्त्रालय रिक्त र केही हेरफेर हुने संकेत पाएपछि नेकपामा मन्त्रीको लागि फेरि दौडधुप हुन थालेको छ । केही नेता भने अघिल्लो पटकको लोकप्रियताकै कारण फेरि मन्त्री बन्ने आशमा छन् । त्यहीभित्र पर्नु हुन्छ पूर्व मन्त्रीद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र महेश बस्नेत । पाण्डे मंसिर ४ को पुर्नगठनमै मन्त्री हुने चर्चा थियो । तर विभिन्न कारणले उहाँ समेटिनु भएन । अहिले फेरि मन्त्रीमा उहाँको चर्चा हुन थालेको छ । त्यस्तै अर्को पूर्वमन्त्री बस्नेत फेरि मन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहनुभएको स्रोत बताउँछ ।